Shotcretre - Henan Arintany Research Keming Mechanical Co., Ltd.
Shotcretre / gunite fampiharana
Shotcrete, gunite na sprayed mivaingana azo tsapain-tanana, na feta nampita alalan'ny Hose ary pneumatically kasaina amin'ny avo velocity anaty ny ambony, toy ny fanorenana teknika. Izany dia nanamafy ny mahazatra matetika vy hazo, vy harato, na ny kofehy.
Shotcrete matetika ny teny rehetra-manavaka ho an'ny ny lena-Mix sy maina-Mix dikan-. Ao amin'ny fanorenana dobo filomanosana, na izany aza, dia milaza ny mandena shotcrete Mix sy gunite ho maina Mix. Eto, ireo teny ireo dia tsy azo ampifamadihina.
Shotcrete no nametraka sy compacted tamin'izany andro izany, noho ny hery sy ny nozzle. Azo sprayed teo misy karazana na endrika ivelany, anisan'izany ny mitsangana na faritra ambony.
Dry sa mando Mix
T dia maina Mix Tafiditra fomba mametraka ny maina Hopper sakafo ho azy ireo, ary avy eo dia fampitana pneumatically alalan'ny Hose ny nozzle. Ny nozzleman mifehy ny koa ny rano tao amin'ny nozzle. Ny rano sy ny maina tsy mifangaro mifangaro tanteraka Izy fa efa mifangaro fenoina toy ny mamely ny fandraisana ambonin'ny. Izany dia mitaky ny mahay nozzleman, indrindra fa tamin'ilay raharaha ny aizim-na be nanamafy ampahany. Tombony ny dingana Mix maina fa ny rano no afa-po eo no ho eo dia azo ahitsy amin'ny alalan'ny nozzleman, mamela ny fametrahana mahomby kokoa eo amin'ny fampiharana mitsangana ambony sy tsy mampiasa accelerators. Ny dingana Mix maina dia ilaina amin'ny fanamboarana fampiharana rehefa ilaina hijanona matetika, tahaka ny fitaovana maina dia mora afaka amin'ny Hose.
Wet-Mix shotcrete Tafiditra pumping ny simenitra voaomana teo aloha, matetika vonona-mifangaro simenitra, ny nozzle. Compressed rivotra dia nampidirina am-nozzle mba hitaomana ny mifangaro teo ambonin'ny ny fandraisana. Ny lena-Fizotry ny fanitsiana amin'ny ankapobeny fomba mahatonga Hiverina kely, fako (raha zavatra latsaka amin'ny tany), ary ny vovoka raha oharina amin'ny maina-Mix dingana. Ny lehibe indrindra manararaotra ny lena-Mix dingana dia ny sakafo rehetra dia miharo ny rano sy ny additives ilaina, ary koa boky lehibe kokoa dia azo apetraka amin'ny kely kokoa ny fotoana noho ny dingana maina.
S hotcrete milina misy izay mifehy ny dingana tanteraka ary ataovy haingana sy mora indrindra. Manual sy ny fomba mekanika dia ampiasaina ho fanafody ny lena, fa lena sprayed dingana mivaingana dia ampiharina amin'ny alalan'ny milina nentim-paharazana. Ny outputs price avo sy ny hazo fijaliana lehibe-mitaky ny fizarana asa ho milina. Concrete fanafody Duplex rafitra amin'ny paompy no tena ampiasaina amin'ny niara-niasa tamin'ny miharoharo lena. Tsy toy ny mahazatra simenitra paompy, ireo rafitra tsy maintsy hihaona ny fepetra hafa anefa ny nanolotra ny simenitra mikoriana izay toy ny tsy tapaka araka izay azo atao, ka noho izany mitohy, mba hiantoka homogeneous dipoavatra fampiharana '.